Jackson, MS • Body Mass ary NuRu Massage
Mitadiava fanosotra vatana sy fanorana nuru tsara indrindra any Jackson, MS.
Jackson, amin'ny fomba ofisialy ny tanànan'i Jackson, no renivohitra sy tanàna be mponina indrindra amin'ny fanjakana amerikana Mississippi. Io dia iray amin'ireo seza distrika roa an'ny Hinds County, miaraka amin'i Raymond, Mississippi. Ny tanànan'i Jackson dia misy ihany koa manodidina ny 3,000 hektara ahitana seranam-piaramanidina iraisampirenena Jackson-Medgar Evers ao amin'ny Rankin County ary ampahany kely amin'ny faritany Madison. Mitadiava ny tsara indrindra manosotra ny vatana ary fanorana nuru any Jackson, MS.